Kuphazamiseka abadlali ngamahlebezi abamatanisa namaqembu amakhulu: Tembo - Impempe
Kuphazamiseka abadlali ngamahlebezi abamatanisa namaqembu amakhulu: Tembo
Sekuke kwanemibiko eyamanisa umdlali weSuperSport United, uSipho Mbule usemabhukwini angcwele asekomkhulu leKaizer Chiefs eNaturena. Kuthiwa lo mdlali onebhola elihle okwazi nokushaya amagoli ekude nepali ungomunye weziqongwane ezifunwa wuGavin Hunt ukuqinisa iqembu ngesizini ezayo.
Nokho iChiefs ayikaphumeli obala ngalokhu, futhi uma kuyiqiniso Amakhosi kungadingeka aqale ngokuxoxa naMatsatsantsa ngaphambi kokukhuluma ngakho. Uzwakale sengathi kuyamcika lokhu umqeqeshi weSuperSport, uKaitano Tembo.
“Kuhlale kunjalo nje ngabadlali bethu okuhlale kunamaqembu abacathamelayo,” ucashunwe esho kanje kwiCitizen uTembo. “Nokho lokhu kukhomba ukuthi siphethe ingqayizivele yabadlali uma iningi lamaqembu lifuna ukuzozingela la kithi uma efuna ukuqinisa.
“Kodwa ke lokho kunzima ngoba laba badlali basebancane futhi lokhu kuyabaphazamisa. Bavele bezwe ukuthi sebefunwa yiqembu elithile bese bekhohlwa wukuthi bagxile emsebenzini wabo okuwukudlala ibhola,” kuchaza uTembo.
“Thina ke sibe sesisala nomsebenzi wokuzama ukuthi sibakhumbuze ukuthi bangakuthatheli ekhanda konke okushiwoyo. Kumele bahlale bekhumbula ukuthi ebholeni kumele uhlale ufuna ukwenza kangcono kunayizolo.
“Abantu bakufuna ngoba ushisa, udlala kahle. Uma uke wehlisa izinga, bayadlula bayobheka abanye abshisayo ngaleso sikhathi. Ukuhlezi uzikhandla futhi udlala kahle ngaso sonke isikhathi yikhona okubalulekile. Yilelo vangeli engihlale ngilishumayela kulaba bafana,” kusho uTembo.
Njengoba eseneminyaka engu-23, uMbule ubukeka esazoya kude ngebhola lakhe. Lo mdlali odabuka eBethlehem, eFree State usengomunye wabangumgogodla weSuperSport.
Akuthusi ke nokuzwa ukuthi iChiefs iyamcathamela ngoba izinga lakhe lihle kakhulu futhi njengoba efuna ukwakha kabusha, engafike angene khaxa esitayeleni sayo, Angithi vele oNkosingiphile Ngcobo noNjabulo Blom udlala nabo eqenjini lesizwe labaneminyaka engaphansi kuka-23.
Previous Previous post: SHWIII!: Asengene amanzi endlini kwiPSL elinda kube sekugcineni ngamacala
Next Next post: UZinnbauer uyayethemba iPirates ukuthi izoyiqwala intaba ezakhele yona kwiCAF